L'Oreal Paris Revitalift Laser X3 Eye Cream (15ml) | Buy online | SHOP.COM.MM
L'Oreal Paris Revitalift Laser X3 Eye Cream (15ml)
အေးမြသည့် အထိအတွေ့ကို ပေးနိုင်ခြင်း
Ma Su Chan Myae
L'Oreal Revitalift Laser X3 Eye Cream (15ml) မျက်စိရောဂါကြောင့်ယောင်ပြီး အရေးကြောင်းပေါ်လာတယ် သူ့ကိုလိမ်းတော့ အရေးကြောင်းတွေတော်တော်ရော့သွားတယ် Read more Hide
May Lae Phyu
Work well !!!!!!
This L'Oreal Revitalift Laser X3 Eye Cream is fantastic. Read more Hide
အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ မျက်လုံးနားမှာ အရေးအကြောင်းလေးတွေ သိသိသာသာဖြစ်လာတယ်။ Loreal Revitalift Laser X3 Eye Cream ကိုသုံးတော့ ဒါတွေကို သိသိသာသာနည်းသွားစေတယ်။ မျက်ကွင်းညိုတာလဲ သက်သာတယ်။ Read more Hide
Loreal Revitalift Laser X3 Eye Cream is the fluid texture that glides easily around your eyes withametal applicator to get an instant cooling effect. It provides an anti-aging eye treatment correcting wrinkles. In addition, it can visibly reduce under-eye bags and stimulates microcirculation.
Specifications of Revitalift Laser X3 Eye Cream (15ml)